နိုင်ငံတကာသတင်းများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
နိုင်ငံတကာသတင်းများ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မကိုယ်တိုင် မူးယစ်ဆေးသုံးသူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာ တရားသလား
President Duterte says he will protect enforcers involved in shootouts. Image via Concept News Central ဖိလစ်ပိုင်သမ္မကိုယ်တိုင် မူးယစ်ဆေးသုံးသူတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာ တရားသလား (မိုက်ခဲစိန် ဘာသာပြန်) မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၆ အမေရိကန်အတွက် အရှက်ရတဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမှုကြီးကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေးသမားတွေကို သတ်ဖြတ်သုတ်သင်ခြင်းခံနေရတာကို ဘာမှ ၀င်မပြောလို့ပါဘဲတဲ့။ အကယ်၍သာ လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဆေးပြသနာကို ထိန်းချုပ်ရေး၏ အဓိကတချက်သာဆိုရင်တော့ သတ်ဖြတ်မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းရပါမယ်။ ဆောင်းပါးရေးသူက Hannah Hetzer (Alternet) ကပါ။ Salon.com မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်များမှာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ...Read more »	နိုင်ငံတကာသာဂိ – သမ္မတလောင်း ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ အတက်အကျများ
နိုင်ငံတကာသာဂိ – သမ္မတလောင်း ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ အတက်အကျများ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လကုန်ခါနီးမှာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီညီလာခံကြီးကနေ သူတို့သမ္မတလောင်းအဖြစ် သေဌေးကြီး ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို တင်မြှောက်လိုက်တယ်။ သူ့ကို လူကြိုက်များတဲ့ နှုန်းတွေ တက်လာတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒီမိုကရက်တွေရဲ့ ပါတီညီလာခံကြီး နောက်ကလိုက်လာတဲ့ပြီး ဒေါ်ကလင်တန် သမ္မတလောင်းအဖြစ် တဖက်ပါတီက အတည်ပြုတဲ့ နောက်ပိုင်း ထရန့်တယောက် တောက်လျောက် ကာလနာတိုက်တော့တာပဲ။ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ တလွဲများဆိုတာ ကျမ်းပြုစုရတော့မလိုပါ။ အခုတော့ သူ့ကို လူကြိုက်နည်းလာပြီလို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ ဘယ်လိုများ ဖြစ်ရပြန်တာပါလိမ့််နော်။ အမေရိကန်တီဗီတွေနဲ့ တခြား သတင်းမီဒီယာတွေက ထရန့်ကြီးနဲ့ သူ့ပါတီတို့ အထိနာနေတာကို တန်းတန်းစွဲလိုက်ပြီး သတင်းပို့နေကြတယ်။ အမေရိကန်ပြည်သား တ၀က်လောက်ကလည်း ထရန့်တယောက် တွစ်တာကနေ ဘာတွေများ...Read more »	ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင် စတိဖင်ဟော့ကင်းက ဗြိတန်ခွဲထွက်တွေကို ဝေဖန်လုိုက်ပြီ
ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင် စတိဖင်ဟော့ကင်းက ဗြိတန်ခွဲထွက်တွေကို ဝေဖန်လုိုက်ပြီ (မိုက်ခဲစိန် ဘာသာပြန်) မိုးမခ။ သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၆ မကြာသေးမီက ဗြိတိန်အမျိူးသားတွေက ဥရောပသမဂ္ဂကနေ ခွဲထွက်ကြောင်း မဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေအထဲမှာ အထင်ကရ သိပ္ပံပညာရှင်၊ မသန်စွမ်းသူ စတိဖင်ဟော့ကင်းလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ သူက သီးခြားခွဲထွက်နေလိုခြင်းနဲ့ ၀န်တို အာဃာတစိတ်ကြီးခြင်းတို့ဟာ လူသားတွေ မျိုးတုန်းစေတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်၊ လူ့ဘောင်လောကမှာ ဥစ္စာဓနအဓိကဆိုတဲ့ သဘောထားကို ပြန်လည် သုံးသပ်စေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဗြိတိန်ထုတ် ဂါဒီယန်းသတင်းစာထဲမှာ သူရေးတဲ့ အက်ဆေးကနေ အသေးစိတ်ထောက်ပြတာကတော့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ဆိုတဲ့အထဲမှာ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာဓနဆိုတာထက် အသိဥာဏ်ပညာ၊ သဘာဝ အရင်းအနှီး နဲ့ လူသားစွမ်းအားတွေကိုပါ ထည့်သွင်း ဖွင့်ဆိုသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျနေတဲ့ မျက်မှောက်လူ့ဘောင်လောကရဲ့...Read more »	ဒီမိုကရက်ပါတီက ညီညွတ်ရေးကို ဦးတည်ပြီ
ဒီမိုကရက်ပါတီက ညီညွတ်ရေးကို ဦးတည်ပြီ (နိုင်ငံတကာသာဂိ) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၆ ပြိုင်ဘက်ပါတီဖြစ်တဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကန်တွေက အမုန်းစကား၊ သွေးခွဲစကားတွေ လက်ရှိအစိုးရနဲ့ တဖက်ပါတီကို တဖက်သတ် စွတ်စွဲမှုတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ ယခုတပတ် တနင်္လာနေ့က ကျင်းပတဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီ ညီလာခံကြီးကနေ ပါတီတွင်းနဲ့ မဲဆန္ဒရှင်များကြားက မတူညီတဲ့ အမြင်တွေ ဆန္ဒတွေကို ပေါင်းစည်းနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းကြားကနေ ပြည်သူတွေ ညီညွတ် ချစ်ခင်မှုနဲ့ ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း တခဲနက် ထုတ်ဖော်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရက်ပါတီညီလာခံမကျင်းပခင် ချိန်ကိုက်ပြီးတော့ ရုရှားဟက်ကာတွေ ခိုးယူသွားတဲ့ ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာ အီးမေးတွေကို ၀ီကီလိ(က်)ကနေ အထုတ်ဖြေလိုက်ပါသေးတယ်။ ၀ိကီလိက်ဆိုတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားရေးလှုပ်ရှားမှုကနေ ကလင်တန်၏ အရှုပ်တော်ပုံတွေကို ပြည်သူကို ချပြပြီး ကလင်တန်နဲ့ ဒီမိုကရက်တွေကို...Read more »	အောင်ခိုင်မြင့် – စစ်နှင့် စနစ်၏သားကောင်များမှ စုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သောနိုင်ငံ
အောင်ခိုင်မြင့် – စစ်နှင့် စနစ်၏သားကောင်များမှ စုပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့သောနိုင်ငံ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၆ ဦးနှောက်၏ အတွေးအခေါ်များကို ပိတ်ဆို့့မနေစေလျက် အရာရာကို တရားသေ တသမတ်ထဲမထားပဲ ခေတ်နှင့်ဆီလျော်သော အတွေးသစ် အမြင်သစ်များဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်သော စိတ်ဓာတ်သည်ပင်လျှင် တိုးတက်သစ်လွင်ခြင်း၏ အသီးအပွင့်ကို ခံစားနေရခြင်း ဖြစ်ဟန်တူသည် ။ ကောင်းကင်တခုထဲအောက်၌ မတူညီသော လူမျိုးများ ၊ ကွဲပြားခြားနားသော သာသာတရားများ ၊ အသွေးအရောင်စုံ သည့် အသားအရောင်များ ၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ယဉ်ကျေးမှုများ ၊ အမြောက်အမြား ဘာသာစကားများကို စုပေါင်းပြီး လူသားအချင်းချင်းတန်ဖိုးထားသည့် လူသားဝါဒအား အခြေခံသော ဓမ္မဒိဌာန်ကျကျ တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်မှုကပင်လျှင် ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်သော တိုင်းပြည်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ် ပွဲလယ်တင့်တယ်နေရပါသည် ဟုဆိုလျှင်...Read more »	ရီပတ်ဘလစ်ကန်ညီလာခံက ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို သမ္မတလောင်းအဖြစ် အတည်ပြုလိုက်ပြီ
ရီပတ်ဘလစ်ကန်ညီလာခံက ဒေါ်နယ်ထရန့်ကို သမ္မတလောင်းအဖြစ် အတည်ပြုလိုက်ပြီ (နိုင်ငံတကာသာဂိ) ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၆ ဇူလိုင် ၁၈ – ၂၁ အထိ အမေရိကန်ပြည်၊ အိုဟိုင်းအိုးနယ်၊ ကလိဗင်းမြို့မှာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီရဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ လများက ပါတီသမ္မလောင်း ရွေးပွဲကနေ ပါတီဝင်တွေရဲ့ မဲအများဆုံး (၁၄ သန်း) နဲ့ ကုဋေကြွယ် သေဌေးကြီး၊ တီဗီသရုပ်ဆောင်၊ အသက် ၆၇နှစ်အရွယ် လုပ်ငန်းရှင်တဦးဟာ ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီက ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများကို ကျော်တက်ပြီး ပါတီသမ္မတလောင်းအဖြစ်ကို သရဖူဆောင်းသွားပါတယ်။ ပါတီတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးဝါရင့်များအတွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှု အများအပြား၊ မကြေလည်မှု အမြောက်အများ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ပါတီထောက်ခံသူ ပြည်သူတွေကတော့ ဒေါ်နယ်မှ ဒေါ်နယ် ဖြစ်နေတာကြောင့်...Read more »	ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ဘာစတီးနေ့မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၈၀ဦး သေဆုံး
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး ဘာစတီးနေ့မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၈၀ဦး သေဆုံး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၆ ဇူလိုင်လ ၁၄၊ ၂၀၁၆ ပြည်သစ်ပြည်၊ နိစ်မြို့မှာ (၁၇၈၉ ခုနှစ် နှစ်လည်) ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးနေ့ (ဘာစတီးနေ့) အထိမ်းအမှတ် ပြည်သူတွေ ဆင်နွှဲနေစဉ် ထရပ်ကားကြီးတစီးက ပရိသတ်ကို လိုက်လံတိုက်သဖြင့် လူ ၈၀ သေဆုံး၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါထရပ်ကားသည် ဗုံးများ၊ သေနတ်များ တင်ဆောင်လာပြီး အာရပ်နွယ်ဖွား ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတဦးက မောင်းနှင်ပြီး လူအုပ်စုအတွင်း သေကြေပျက်ဆီးစေရန် လိုက်လံတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက ကားကို ပစ်ခတ်ပြီး တားဆီးခဲ့ရာမှာ ကားသည် နိစ်မြို့ လူထုပရိသတ်အတွင်း ၂ ကီလိုမီတာနီးပါး တိုးဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်သမားသည် အစွန်းရောက်သူတဦးဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သူလား၊ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဆက်သွယ်သူလား အတိအကျ စုံစမ်းမသိရှိရသေးပေ။ မည်သည့် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကမှ သူတို့လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုလည်း မကြေညာသေးပေ။ ပြင်သစ်ပြည်တွင်...Read more »	အက်ဆစ်က မဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းများရဲ့ စိတ်ဓာတ်အလှတွေ ဖေါ်ကျူးနေရာ ‘ဆုံစည်းရာ’ ကော်ဖီဆိုင်
အက်ဆစ်က မဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကောင်းများရဲ့ စိတ်ဓာတ်အလှတွေ ဖေါ်ကျူးနေရာ ‘ဆုံစည်းရာ’ ကော်ဖီဆိုင် (ခင်လေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းအေး ပူးပေါင်းရေးသား စုစည်းတင်ဆက်သည်) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၆ “နင် ငါ့မျက်နှာကို ဖျက်ဆီးနိုင်ပေမယ့် ငါ့ရဲ့ ရှင်သန်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒကိုတော့ သတ်လို့မရဘူး၊။ နင် ငါ့ရဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အက်ဆစ်နဲ့ပက်လို့မရပါဘူး …. ….” ပုံ (၁) ■ မတရားမှုကို ခံခဲ့ရပေမယ့် ဘဝကို အပြုံးမပျက် ရဲရဲရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ အက်ဆစ်ဒဏ်ခံ အမျိုးသမီး ကြီးကျယ်လှတဲ့ ဂူဗိမာန် ဆောက်ကာ သူ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တိုင်းတာပြပြီး သမိုင်းမှာတွင်ကျန်စေခဲ့တဲ့ ရှားဘုရင်ကြီးရဲ့ တာ့ဂ်ျမဟာ (Taj Mahal) ရှိရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ...Read more »	နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ တခေတ်ဆန်းလိုက်တဲ့ Pokemon-GO ပေါက်
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ တခေတ်ဆန်းလိုက်တဲ့ Pokemon-GO ပေါက် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၆ ကွန်ပြူတာကစားနည်း တခုဖြစ်တဲ့ ပိုကီမွန်ဂိမ်းဟာ သက်ကြီး သက်ငယ်တွေကြား နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်က နည်းပညာဂိမ်း ကုမ္မဏီတခုဖြစ်တဲ့ Nintendo ပိုင် ကုမ္မဏီခွဲဟာ ၁၉၉၀ ကတည်းက လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်က မြေပုံပေါ်မှာ ပိုကီမွန်အရုပ်ကလေးတွေနောက် ခြေရာခံပြီး ကစားသူက လိုက်ရပါတယ်။ ပိုကီမွန်အရုပ်မျိုးစုံကို စုဆောင်းပြီးနောက် ပြိုင်ဖက်တွေ (အခြားကစားသူ(အွန်လိုင်း) သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာဖန်တီးတဲ့ ရန်သူ) နဲ့ ကစားနည်းထဲမှာ တိုက်ခိုက်ပြီး အမှတ်တွေစုဆောင်းရတာပါ။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကစားနည်းကတော့ Pokemon-Go ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်း (အင်ဒရိုက်၊ အိုင်ဖုံး ၂ မျိုးစလုံး) မှာ အခမဲ့...Read more »	အမေရိကားက ပုလိပ်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပိုဆိုးဝါးလာ
Dallas police order people away from the area after several police were shot in downtown Dallas. (AP Photo/LM Otero) အမေရိကားက ပုလိပ်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပိုဆိုးဝါးလာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၉၊ ၂၀၁၆ အမေရိကန်ပြည် ဇူလိုင် ၄ – လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပွဲတော် တပြည်လုံးအတိုင်းအတာ ဆင်နွဲကြပြီး တပတ်အတွင်းမှာ ပုလိပ်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ပုလိပ်အပေါ် တုန့်ပြန် အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ သွေးချောင်းစီးရပြန်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၆ရက်၊ ၂၀၁၆၊ လူဝီဇီယားနားပြည်နယ်၊ Baton Rogue မြို့လေးမှာ ပလက်ဖောင်းပေါ် ဈေးရောင်းနေတဲ့ လူမည်းကို အရပ်က...Read more »	Page4of 23«1...23456...23»
မိုးမခ လမ်းညွှန်မှာ သင့်လုပ်ငန်း ပါသလားကုမုဒြာ ဂျာနယ် - KuMuDra News Journal Pen Myanmar - မြန်မာ ကလောင်ရှင်များ Royal Shop - မြန်မာအွန်လိုင်း စာအုပ်အရောင်းဆိုင် (အိမ်အရောက်ပို့မည်) Dr San San Myint, MD - ဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့် ဆေးခန်း Simon Lim, DDS - ဒေါက်တာစိန်ဝင်း (သွားဆရာဝန်) MoeMaKa Yangon Office - မိုးမခ ရန်ကုန်ရုံး El Cerrito Dental Care - Raymond Yu, DDS Rangoon Superstar - ရန်ကုန်စူပါစတား Hornbill Burmese Cuisine - အောက်ချင်းငှက် မြန်မာထမင်းဆိုင် Where to Eat in Mandalay - မန်းစားသောက်ဆိုင် လမ်းညွှန် အခြား ဖတ်စရာများနယူးယောက်၊ အယ်ဘနီက မြန်မာကဗျာရွတ်ပွဲ အောင်မြင်
ဒီလို ကြော်ငြာချင်သလားBurmese Second-Hand Books Stalls - ရန်ကုန်မှ စာအုပ် အဟောင်းဆိုင်များ Real Link Hotel - မြန်မာမိသားစုများအတွက် ဟိုတယ် ပညာရေး အထောက်အကူပြု - ဂန္ထ၀င်သစ်စာပေ မိုးမခကို အိမ်အရောက် ပို့ပေးမည်
ကြော်ငြာရန် …ဆောင်းဖြူ ရဲ့ "ရန်ကုန်ဟာ မလုံခြုံတော့ဘူး" စာအုပ်သစ် Nann Oo - နန်းဦး စာပေ ဖြန့်ချိရေး Burmese Community Services (နယူးယောက်၊ ဘတ်ဖဲလိုးမြို့) Moh Kitchen - မှို စာဖိုဆောင် မိုးမခနဲ့ ပတ်သက်သမျှ မိုးမခ မတ်၊ ၂၀၁၇ ထွက်ပါပြီ